Bruges मा5राम्रो कफी पसलहरु | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | चुरोचो, सुझावहरू
युरोपमा सब भन्दा सुन्दर पुराना शहरहरू मध्ये एक हो ब्रुज, बेल्जियममा। म कसैलाई चिन्दिनँ जो यूरोपमा पाइन्छन् र भ्रमण गर्दैनन्, तर पहिलो पटक जब उनी पछि कुनै पनि यात्राहरूमा यात्रा गर्छन्। यो वेस्ट फ्लान्डरको राजधानी हो र यो ब्रसेल्सबाट २० किलोमिटर मात्र पर छ, राष्ट्रिय राजधानी।
यसको राम्रो पुरानो शहर देशको पर्यटक चुम्बक हो: २००० देखि विश्व सम्पदा हो र यद्यपि यसमा समय आएको छ र पुन: संरचनाहरू आज प्रशस्त छन्, त्यहाँ धेरै मध्ययुगीन खजाना र दर्जनौं पुलहरू छन् जुन वरिपरि हिंड्न हराउन सकिन्छ। र अनिवार्य ब्रेकमा, कसरी कफी र केही मीठा चीजको बारेमा? यी ती हुन् जो लेख्नुहोस् ब्रुगेसमा best उत्तम कफी पसलहरू.
2 मा रिका RoKK
4 पुस्तक र ब्रन्च
5 गुलिभर रूख
म भन्दछु कि साथीहरूसँग जानु उत्तम छ किनकि सबै कुरा वातावरण अति नारी छ वा हाम्रो पश्चिमी संस्कृतिले के द्वारा बुझ्छ: गुलाबी रंग सबै तिर, फूल फुलेको पर्दा, ओभरस्टफ्ड सोफेहरू... सुपर नाजुक।
प्रतिष्ठा बेकरी सस्तो ठाउँ होइन तर सेवा र व्यंजनहरु को साथ यो सेवा को लागी लायक छ। Waffles उत्कृष्ट हो र यो नै चकलेट दुध हो, waffles फलफूलका रूखहरू, चिया, बन्स, चकलेटहरू र खाना व्यंजनहरू जुन सरल र हल्का भए पनि अत्यन्त स्वादिष्ट हुन्छन्।
कर्मचारीहरु धेरै मैत्रीपूर्ण छन्। यदि तपाईं कपटी ठाउँहरू मनपर्दैन, ती कहिलेकाँही मूल्य बढेका छन् र मात्रामा छोटो हुन्छन् (स्वाद छैन), त्यसपछि अगाडि जानुहोस्। जब सम्म तपाईं सजावट आकर्षक पाउनुहुन्न। त्यसोभए, चुपचाप सुत्नुहोस्
ठाउँ यो Bruges को मुख्य वर्गको नजिक छ र यो पर्यटक र स्थानीयहरू मा धेरै लोकप्रिय छ त्यसैले कृपया भीड घण्टाबाट बच्नुहोस् बिहानको खाजा र नास्ता शान्तिमा रमाउन।
मा रिका RoKK
यो साइट हो बार र ब्रेकफास्ट स्थान को मिक्स। बिहान यो एउटा उत्कृष्ट ठाउँ हो कि अखबार किन्न वा ल्यापटप खोल्न र बिहानको बिहानको खाजा। छ ब्रुगेसमा सबैभन्दा सुन्दर र विशाल टेरेसहरू मध्ये एक र यसको ग्राहक जवान छ।
ऊ करीव २ years बर्षको छ र ड्राइभ छ सस्तो मूल्य निष्पक्ष हुन शहरको बीचमा। दिउँसो संगीत सुरू हुन्छ त्यसैले धेरै आरामदायक वातावरणमा बियरको केही पिन्ट पिउन बढी हुन्छ जहाँ पप र आर एन्ड बी प्रायः आवाज लाग्छ।
तपाईं यसलाई '' t Zand, at०० मा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईं ती प्रसिद्ध "पब क्रलहरू" मध्ये कुनै एकको लागि साइन अप गर्नुहुन्छ भने तपाईंलाई निश्चित रूपमा रातमा थाहा हुन्छ।
यो क्याफे ब्रुजको अर्को सुन्दर कुनामा हो। यस ठाउँलाई चित्रकार रोजर गोब्रोनले मूल चित्रका साथ सजिलो बनाएका छन जुन उनी १ 1988 1985 देखि १ XNUMX XNUMX सम्म त्यस घरमा थिए। यसले हामीलाई उत्कृष्ट प्रदान गर्दछ। coffees को विविधता कालो, अर्को फिल्टर कफी, दूध सहितको कफिजको दायरा सहित क्याप्चुकोको विकल्प, क्रीमको साथ दूध, कारमेल वा भनिला, आइस्ड कफी र कफीको तीन विकल्पहरू रक्सीको साथ (एक स्पर्शको साथ) काचा, अमारेटो वा व्हिस्की)।
Li O Lait Dweerstraat 30 र मा छ चाँडै खोल्नुहोस् बिहान, 8::30० बिहान।
पुस्तक र ब्रन्च
नामले यो सबै भन्छ। ब्रन्च सामान्यतया ब्रुज वा बेल्जियममा लोकप्रिय छैन तर योमा सेवा गरिएकोमा यो लागू हुन्छ सानो रेस्टुरेन्ट / क्याफे। यसको मालिकहरू एक जोडी हुन् जसले यसलाई मन पराउँछन् घर पकाउने त्यसैले केक, रोटी, मिठो, जुस र स्याउरी डिशहरू, विशेष रूपमा सूपहरू, अविश्वसनीय हुन्।
बिहानको खाजा सब भन्दा सिफारिश गरिएको हो र सोमवार देखि शुक्रवार सम्म बिहान served देखि दिइन्छ। भित्र तपाईं लाभ लिन सक्नुहुन्छ नि: शुल्क वाइफाइ वा यदि तपाईं केहि घण्टा पुरानो जमानामा खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं माथिल्लो तलामा थुप्रै पुस्तकहरू मध्ये एक उधार लिन छनौट गर्न सक्नुहुन्छ (ती माथिको अंग्रेजीमा हुन्छन् जबकि हातको नजिकको, तल्लो तल्लामा, डचमा हुन्छन् र बिक्री को लागी केहि भन्दा बढि)।
पुस्तकहरु र ब्रन्च त दिउँसो को भीड हुन को लागी गर्छ चाँडै जाने प्रयास गर्नुहोस्। साथै, सप्ताहन्तमा बन्द छत्यो दिमागमा राख्नुहोस्।
एक परिकल्पना नामको एक चिया घर, यद्यपि दुबै चिया र कफी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। यसको मालिकको हजुरआमाको नाममा यसको नाम राखिएको छ, एक अwo्ग्रेजीले १ th औं शताब्दीमा बेल्जियमसँग विवाह गरेकी छिन्। यो मध्यकालीन गल्लीहरूमा लुकेको छ शहर र वातावरण यसको नरम आर्म चेयरहरू, यसको कालीनहरू, यसको काठको फर्श र यसको सेता पर्खालका साथ आरामदायक छ। कुर्सीहरू स्टान्ड स्क्यान्डिनेभियन हुन्, त्यहाँ पुस्तकहरू छन् र यो क्याफे भन्दा पारिवारिक घरमा बस्ने कोठाजस्तो देखिन्छ।
कफि सिमीहरू मैदानमा जमिनमा छन्, त्यसैले अब हरेक पनी तपाईं ग्राइन्डर आवाज सुन्नुहुनेछ र ताजा जमिनको कफीको गन्ध लिन सक्नुहुन्छ। चिया कोठामा दाउरा जलेको फायरप्लेस छ र चिनियाँ माटाका भाँडा हो त्यसैले ग्रिन्डरको आवाजले यसको क्लि to्क थप्यो। यो एक हो परिवार क्याफे अन्नी र जिलीद्वारा सञ्चालित
तपाईं नास्ता वा खाजा खान सक्नुहुन्छ। तपाईं दुई किसिमका ब्रेकफास्टहरू बीचमा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, परम्परागत वा स्वस्थ एक, चिया, कफी वा फल र हर्बल इन्फ्युसनहरू र सबै प्रकारका पेस्ट्रीहरू छनौट गर्नुहोस्। बिहान fast देखि बिहान ११::9० सम्म बिहानको खाजा सेवा गरिन्छ। त्यस समय देखि खाजा सेवा दिन सुरु हुन्छ (दिउँसो २ बेलुका सम्म)।
मूल्यहरु? बटर रोल, हेम र न्यूटेलाको रोटी रोलको मूल्य २, 2० यूरो छ, रोटीको एउटा टोकरी मख्खन, हेम र न्यूटेलामाeयूरो, जैविक पोय अण्डा, २, e० युरो, ग्रीस दहीको गिलास होममेड ग्रानोला ११, included० समावेश छ। सबैभन्दा सिफारिस गरिएको हो पूरा खाजा फल, किशमिश, बीउ र जामुन, नरिवलको दूध, दलिया, दूध वा दही लागतको साथ ,, .० यूरो दिनको सूपको लागतeयूरो छ।
स्वाभाविक रूपमा, ब्रुजमा त्यहाँ धेरै अन्य क्याफेहरू, र अधिक धेरै पबहरू छन्, तर यी सबै भन्दा प्रामाणिक र एक हुन् जुन पर्यटक र स्थानीयहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दछन्। त्यसपछि उनीहरूलाई चिन्नुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » चुरोचो » Bruges मा good राम्रो कफी पसलहरु